Xulashada ugu fiican ee sheekooyinka qarsoodiga ah
Dib u eegista sheekada qarsoodiga ah
5 buug oo ugu fiican Matilde Asensi
Qoraaga ugu iibinta badan Isbaanishka waa Matilde Asensi. Codad cusub oo xoog badan sida kuwa Dolores Redondo Waxay ku soo wajahan yihiin goobtan sharafta leh ee qoraaga Alicante, laakiin wali waxay hayaan waddo dheer oo ay ku gaari karaan. Waayihiisii ​​dheeraa, ganacsigiisa iyo tirada akhristayaasha...
Dhaxalka Maude Donegal. Wiilka badbaaday: Laba sheeko oo qarsoodi ah, oo ay qortay Joyce Carol Oates
Waxa jira qoraayaal ka gudba nooca loo dhiibo mid kasta oo ka mid ah sheeko-abuuradooda cusub. Tani waa kiiska Oates waxayna ku dhacdaa xirmadan dhiirigelinta murugada leh laakiin taasi waxay u malaynaysaa hab dhan oo loo wajaho baaxadda ugu dambeysa ee dhimashada, isku dayada xiriirka ruuxiga ah ee kuwa ...
Calaamadda iskutallaabta ee Glenn Cooper
Waxay ahayd wakhti dheer tan iyo markii aan la kulmay sheeko ku saabsan ceebaynta Masiixiyiinta oo had iyo jeer tilmaamaysa ka sarreeya sida xusuusta kuwa Ilaah doortay. Marka waxaa mudan in la tilmaamo dhagartan in maanta ay soo bandhigto kiis cusub oo quduusnimo ah, doorasho ...
3 buug oo ugu fiican Julián Sánchez
Awood u lahaanshaha in la ogaado waxa ka hooseeya usha hoosteeda ee ciyaarta kubbadda koleyga waxay u baahan tahay feejignaan iyo xirfad lagama maarmaan u ah in la ogaado gacantaas oo ku dhacda gacanta qofka ka soo horjeeda halkii ay kubbadda ku dhici lahayd. Ama ku dheji dariiqa hoose ee kubbadda oo burinaya ...
3-da buug ee ugu wanaagsan Agatha Christie
Waxaa jira maskaxyo mudnaan leh oo awood u leh inay soo bandhigaan kun iyo hal shirqool oo leh qarsoodigooda u dhigma iyagoon burburin ama duugoobin. Waa lama -taabtaan in la tilmaamo Agatha Christie iyada oo ah boqoradda nooca dembi-baadhista, oo ah tii markii dambe u soo baxday sheeko-yaal-dembiyeedyo, thrillers iyo kuwo kale. Iyadu kaligeed, iyo iyada oo aan la helin caawinta weyn ee dhammaan ...
3 buug ee ugu fiican Carlos Ruiz Zafón
Dib ugu noqoshada 2020, mid ka mid ah qorayaasha ugu waaweyn nuxur ahaan iyo qaab ahaan ayaa naga tagay. Qoraaga qanciyey dhaleecayn iyo kasbaday aqoonsi caan ah oo barbar socda ayaa u turjumay iibiyeyaasha ugu wanaagsan dhammaan buugaagtiisa. Malaha qoraaga Isbaanishka ee loogu akhriska badan yahay Cervantes ka dib, laga yaabee ogolaanshaha…
5-da buug ee ugu fiican Javier Sierra
Ka hadal Javier Sierra Waxay ka dhigan tahay gelitaanka ifafaalaha iibka wanaagsan ee lagu sameeyay Spain. Qoraaga Teruel wuxuu noqday kan ugu iibka badan buugaagtiisa Spain iyo adduunka oo dhan. dhammaan buugaagta Javier Sierra Waxay bixiyaan biilka caadiga ah ee shaqada sirta weyn, oo leh xiiso leh…
Bogga1 Bogga2 ... Bogga12 Xiga →